Fitakiana tambin-karama :: Raikitra ny ambana fitokonan’ireo mpianatra ho mpitsabo eny amin’ny hopitaly • AoRaha
Fitakiana tambin-karama Raikitra ny ambana fitokonan’ireo mpianatra ho mpitsabo eny amin’ny hopitaly
Miverina ny olan’ ireo mpianatra ho mpitsabo na ireo « interne » eny amin’ny hopitaly. Manambana ny hitokona izy ireo, anio, raha tsy voaloa ny tambin-karama tokony horaisiny ho an’ny volana mey sy jona lasa teo. Araka ny fantatra, mbola tsy nahazo ny daty mazava avy amin’ny minisitera tompon’ andraikitra amin’ny fandoavana an’izany izy ireo. Efa nametraka fampilazana 24 ora ireto mpianatra ho mpitsabo ireo fa raha tsy nisy ny vahaolana dia raikitra ny fitokonana izao.
« Tapaka tamin’ny fivoriambe fa hitokona izahay rahampitso (ndlr: anio) ary tsy miasa eny amin’ny hopitaly mihitsy, na dia ny fiandrasan-draharaha aza », hoy ny solon­tenan’ ireo mpianatra ao amin’ ny fikambanan’ny mpitsabo « interne » na AIM , omaly.
Efa hetsika faharoa izao ataon’ny mpianatra ho mpi­tsabo izao, tamin’ity taona ity. Tamin’ny volana avrily ny voalohany, niarahan’ireo mpianatra avy any amin’ny faritra. Ny eto Antananarivo ihany kosa no hihetsika amin’ ity faharoa ity. Nisy mihitsy ny filanjana sora-baventy nataon’izy ireo teny amin’ny tobim-pahasalamana iray teto an-drenivohitra tamin’ izany hetsika voalohany izany.
Hiavaka ny anio raha ho raikitra satria hijanona any an-trano avokoa izy ireo. “Tsy misy filanjana sora-baventy fa hiato tsy hiasa izahay mandra-pivoakan’ny vola. ”, hoy hatrany ny solontenan’ny AIM. Hisy ihany anefa ny fivoriambe hataon’ny ampahany amin’ireo mpianatra ireo, anio. Marihina fa ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy fahavalo efa miasa eny amin’ ny tobim-pahasalamana ary ireo mpitsabo mianatra amin’ny lalam-piofa­nana mano­kana no voakasik’ izao hetsika izao. Tena manampy betsaka ny mpitsabo sy ny fampihodinana ny hopitaly izy ireo.
Rafitra niandraikitra ny sarimihetsika :: Vonjimaika hatrany ny fisoloan-toerana ny OMACI teo aloha
Baolina kitra – « CAN 2019 » :: Mbola tazonin’i Nicolas Dupuis ho ekipa goavana i Tonizia